मसान्त सकियो, भुक्तानी सकिएन - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
मसान्त सकियो, भुक्तानी सकिएन
चेक नदिएपछि गोरखाका एलडिओ र प्राबिधिक कार्यालयका डिई निर्माण व्यवसायीको घेरामा
प्रशन्न पोखरेल गोरखा साउन १
शनिबार राति १२ बजेसम्म बिभिन्न योजनाको भुक्तानीका काम भएको र चेक बनाउन ढिलाइ हुँदा निर्माण ब्यबसायीले प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीलाई हातपात (घोक्¥याएको) भन्ने खबर बिहानैदेखि बजारमा चलेको थियो। घटना के भएको हो बुझ्न जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बिहान दश बजे पुग्दा उपभोक्ता समिति र बिभिन्न योजनाका निर्माण ब्यबसायीको बाक्लो उपस्थिती देखियो। उनीहरु एकै स्वरमा ‘काम सकेपनि जिससले पैसा रोक्यो, लेखापालले फाइल अघि बढाइदिएन र पैसा फिर्ता गयो’ भनिरहेका थिए।
यत्तिकैमा स्थानीय बिकास अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यलाई उपभोक्ता समिति र निर्माण ब्यबसायीहरुले कार्यकक्षमै घेरे। भन्दै थिए, ‘एलडिओसाब योजना सम्पन्न गरी प्राबिधिकबाट मूल्याङ्कन गराई फाइल पेश गर्दा पनि किन भुक्तानी आदेश दिनुभएन, किन चेक बनेन?’ छ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरी रु. तीस लाख भुक्तानी लिन एक सातादेखि जिससमा धाउँदै आउनुभएका छोप्राकका भोजराज पोखरेलले छिटो भुक्तानी दिनुपर्ने माग गर्दै निवेदन पेश गरे।
उनले भने, ‘०७३ फागुनमा योजना सम्झौता गरी चैतदेखि डोजर लगाएर नालीसहित सडक खनें। ०७४ असार ५ मा प्राबिधिकमार्फत् अन्तिम मूल्याङ्कन पनि सम्पन्न गरी भुक्तानीका लागि असार ३१ गते बिहान ११ बजे जिससको लेखा फाँटमा फाइल बुझाएँ तैपनी बजेट दिएनन्, चेक बनाइदिएनन् पैसा फिर्ता गएछ।’ आफूले भन्दा पछि पेश भएका फाइलहरुको चेक बनेको भन्दै उनी आक्रोशित छन्।
यस्तै सदरमुकाममा प्रथम सहिद लखन थापाको सालिक राख्ने योजनाको काम पूरा भएपनि रु. सात लाख ५० हजार भुक्तानी नदिई जिससले बजेट फिर्ता गरेपछि प्रथम सहिद लखन प्रतिष्ठानका रुलबहादुर आलेलाई झोक चलेको छ। उनले भने, ‘योजनाले तोकेअनुसारको सबै काम सम्पन्न भइसकेको थियो। भुक्तानी आदेश गरी लेखाबाट चेक बन्नुपर्ने भएपनि बनेको रहेनछ बजेट फिर्ता गयो।’
३५ वटा ठूला योजनाका काम पूरा भएपनि जिससले आर्थिक बर्षको अन्तिम दिन शनिबार उपभोक्ता समिति र निर्माण ब्यबसायीलाई चेक नदिएपछि समस्या भएको हो। काम सम्पन्न भइसके पनि बजेट रोकिएकोबारे उपभोक्ताहरु र निर्माण ब्यबासयीले जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयका प्रमुख होमनाथ पौडेललाई पनि कार्यकक्षमै पुगेर घेरेका छन्। कार्यालयमा १५ जनाभन्दा बढी प्राबिधिक कर्मचारी रहेपनि उपभोक्ता र निर्माण ब्यबसायीले योजना अन्तिम मूल्याङ्कन गर्न बोलाउँदा नजाने, ढिला गरी जाने गर्दा समस्या भएको हो।
तोकिएको काम पूरा गर्दा पनि रु. ५० लाख बजेट नआएको सहिद बासु स्मृति प्रतिष्ठानका सचिव गुणराज रोकाले गुनासो गर्दै भने, ‘करिब २० लाख हार्डवयर पसलमा तिर्न छ। कहाँ बाट पैसा ल्याएर तिर्ने? घरखेत बेचेर योजनाको काम गर्ने हो?’ योजनाका अधिकांश कामहरु भएपनि जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयका प्राबिधिकहरुले समयमै योजनाको मूल्याङ्कन नगर्दा आर्थिक बर्षको अन्तिममा समस्या देखिएको हो। प्राबिधिक कार्यालयले भूकम्पपछि आएका योजनाहरु पनि हेर्नुपर्दा केही योजना मूल्याङ्कनमा ढिलाइ भएको बताएको छ।
आ.ब. २०७३-०७४ मा गोरखामा आएको ७५३ वटा योजनामध्ये सात सय योजनाको मात्रै सम्झौता भएको थियो। गोरखाको बित्तिय प्रगती ७४ प्रतिशत रहेको भन्दै आचार्यले समयमै उपभोक्ता समिति, निर्माण ब्यबसायीले फाइल पेश नगर्दा बजेट फिर्ता भएको दाबी गरे। गोरखामा एक अर्ब आठ करोड बजेट आएकोमा असार मसान्तसम्म एक अर्ब चार करोड खर्च भइसकेको छ। करिब ३५ वटा ठूला योजनाको भुक्तानीका लागि रु. तीन करोड १५ लाख रुपैंया आवश्यक पर्ने देखिन्छ। रु. तीन करोड ५० लाख शनिबार राति १२ बजे फिर्ता भएको थियो।
तीन दिनमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने ?
असार मसान्तमा फ्रिज भएर जाने बजेट असार २८ गते खर्च गर्न सक्ने अख्तियारी आएको स्थानीय बिकास अधिकारी आचार्य बताउँछन्। दुई-तीन दिनमा उपभोक्ता समितिबाट कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्दै उनले सरकारको नीतिगत समस्याले गर्दा बजेट भुक्तानीमा थप समस्या भएको हो भने। आर्थिक केन्द्र जोड्ने ३२ वटा सडकको योजना अघि बढाउन असार २८ मा अख्तियारी आएको थियो।
असार १२ मा अख्तियारी आएको खेलकूद मैदानहरु निर्माण गर्ने योजनाका लागि रु. दुई करोड ४५ लाखमध्ये एक करोड ३० लाख बजेट मात्रै खर्च भएको छ। स्रोत सुनिश्चित भएको भन्दै अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिले ऋण खोजी गरी निर्माण गरेको भएपनि असार मसान्तमा बजेट फिर्ता भएपछि समस्याले उग्र रुप लिएको हो। आचार्यका अनुसार अब मलेपको १८ नं. अनुसार फाइल भरेर स्थानीय बिकास मन्त्रालय पठाएपछि स्थानीयले अर्थ मन्त्रालयसंग छलफल गरी फिर्ता भएको बजेट सोही शीर्षकमा पुनःजिल्ला पठाउँछ।
प्रकाशित १ साउन २०७४, आइतबार | 2017-07-16 16:58:05